Ny fiantraikan'ny torimaso amin'ny hatsembohana (Sy ny andininy Versa) ary ny zavatra azonao atao momba izany - -Kevi-Pitantanana
Ny fiantraikan'ny torimaso amin'ny hatsembohana (sy ny vice vera) ary ny zavatra azonao atao momba izany
Tsy dia mila lazaina aminao ianao fa mifamatotra ny toe-tsainao sy ny torimasonao. Rehefa dinihina tokoa, iray alina monja amin'ny fanipazana sy fihodinana dia mety hiteraka toe-po ratsy na mora tohina amin'ny ampitso.
Na izany aza, efa nanontany tena ve ianao hoe maninona no mitranga izany sa inona no tena fifandraisana misy eo amin'ny toe-tsaina sy ny torimaso?
Raha manana ianao, dia eo amin'ny toerana mety. Ity lahatsoratra ity dia miresaka ny lafiny rehetra mifandraika amin'ireo singa roa ireo ary mamaritra ny fiantraikan'izy ireo eo amin'ny samy izy ireo.
Mila jerena ihany koa ny fomba fampiasana ity fifandraisana ity ho tombontsoanao.
Inona no vokatry ny torimaso amin'ny fonao?
Ankehitriny, rehefa mahazo ny haben'ny torimaso , mahasoa ny fiadananao ara-pientanam-po izany, ka hahatonga anao hanana toe-tsaina tsara.
Na izany aza, raha tsy mahita torimaso ianao dia azo inoana fa tsy maintsy miady amin'ny fihetsem-po ratsy kokoa.
Noho izany, andao jerena akaiky ity fisehoan-javatra ity.
Ahoana no vokatr'izany amin'ny torimaso tsara?
Ny marina dia, tsy dia misy fikarohana firy ao Ahoana misy vokany tsara amin'ny torimaso ny torimaso satria ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia liana amin'ny vokatra mifanohitra amin'izany.
Na izany aza, misy fikarohana vitsivitsy milaza fa ny haben'ny torimaso azonao dia afaka mamaritra ny toetranao sy ny toetranao mihitsy aza.
ny santionany miorina amin'ny fiarahamonina nijery ny isan'ny ora natory olona sy ny fiantraikan'izany teo amin'ny fahatokisan-tenany sy fahatsapana fiheveran-tena .
Tamin'ny haben'ny santionany 1 805, dia hita fa ireo olona natory teo anelanelan'ny fito sy adiny valo isan'alina dia nitatitra ny haavon'ny fanantenana sy ny fahatokisan-tena avo indrindra.
Ireo izay nahazo na latsaky ny adiny enina na mihoatra ny sivy ora dia azo inoana fa hanana fahatokisan-tena ambany.
filaharambe fitsangatsanganana wwe 2016
Izy io dia mifanaraka amin'ny porofo omen'ny National Sleep Foundation fa ny olon-dehibe dia tokony hikendry torimaso eo anelanelan'ny fito sy sivy ora isan'alina.
Noho izany, ny olona tsirairay dia afaka mahita ny tenany amin'ny fahazavana tsara kokoa rehefa mahazo torimaso mahitsy.
Fandinihana ny fiantraikan'ny torimaso amin'ny fiadanam-po
Ankehitriny, raha miteraka fihetseham-po tsara ny torimaso, inona no maha-zava-dehibe izany amin'ny fahasalaman'ny olona, ​​indrindra amin'ny fotoana maharitra?
ny < a> (miaraka amin'ny Oxford Economics sy ny National Center for Social Research any UK) dia manondro fa ny kalitaon'ny torimaso dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ireo olona afa-po amin'ny fiainany.
Raha ny marina, rehefa nijery ny mason-tsivana niavaka indrindra ireo olona faly noho ireo izay sahirana, dia mazava ny valiny: torimaso ampy dia ny fahasamihafana lehibe teo anelanelan'ireo olona ireo afa-po amin'ny fiainany ary ireo izay tsy.
hafa fandalinana ampitana izay nahitana mpandray anjara 736 dia nanamarina raha mety handresy ny torimaso psychosocial hafa ny torimaso izay nahatonga ny fahasalamana. Anisan'izany ireo lafiny toy ny fahaketrahana ara-tsaina sy ny fahasahiranana ara-bola.
Ny fandinihana dia nanaporofo fa rehefa nahazo torimaso ampy ireo mpandray anjara dia azo inoana fa hiaina fahatsapana fiadanam-po tsara amin'ny ankapobeny.
Mandritra izany fotoana izany dia hita fa ny torimaso ampy dia mety miasa ihany koa handresena ny ratsy mitarika psychosocial izay niainan'ny olona isan'andro.
Inona no vokatry ny torimaso kely loatra ny moodinao?
Andao hodinihintsika izao ny lafiny atsimbadika. Tsy azo lavina fa mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny toe-javatra isan-karazany rehefa tsy ampy torimaso ianao. Na izany aza, manao ahoana ny halehiben'io fisehoan-javatra io?
Ny valin'io dia azo faritana tsara indrindra amin'ny fandinihana a fianarana natao amin'ny mpitsabo. Ny mpikaroka dia nanaraka ny roa taona nitoeran'ny olona 78, nanamarika ny valintenin'izy ireo tamin'ny toe-javatra samihafa nandritra ny androm-piainany.
Araka ny efa nampoizina, ny mponina tsy ampy torimaso dia mety hanao fihetsika ratsy rehefa sendra toe-javatra tsy mahazo aina na manahirana.
Ny nahagaga anefa dia na ny toe-javatra mahafaly na tsara aza dia voaloton'ny fihetseham-po ratsy.
Midika izany fa rehefa reraka dia tsy afaka miaina fahafinaretana ny olona noho ny hoe miala sasatra tsara.
Ahoana no fomba fatoriana haingana: Fomba 8 hihemorana amin'ny ora firaketana
Ahoana ny fomba hifohazana maraina ary ho mailo, na dia mankahala maraina aza ianao
Antony 7 mety hahatonga ny fiovan'ny toetr'andro
Famantarana 8 manaitra anao dia reraka ara-tsaina sy ara-pihetseham-po
Ny fiantraikan'ny torimaso amin'ny ampahany amin'ny ati-ponao mifehy ny toetranao
Miaraka amin'ireo vokatra rehetra ireo ao an-tsaina, andao hojerentsika ny fomba maha tompon'andraikitra amin'ny asan'ny toe-po ny ampahany amin'ny ati-dohanao rehefa tsy natory ampy ianao.
Fanandramana manokatra maso nijery ny fomba fandraisan'ny ati-doha ny fientanam-po taorian'ny tsy fahampian'ny torimaso.
Ankehitriny, ny firafitry ny ati-doha lehibe hifantohana eto dia ny amygdala, cortex prefrontal medial, ary ny locus coeruleus.
zavatra tokony hatao rehefa mankaleo ianao
Ny amygdala dia rafitra atidoha izay tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ny fihetsem-po. Rehefa naseho sary ireo mpandray anjara tsy ampy torimaso, manomboka amin'ny bland ka hatramin'ny mahatsiravina, ny amygdala dia nampiseho hetsika lehibe kokoa noho ny vondrona mpitantana.
Noho izany, rehefa tsy ampy torimaso ianao dia mety hanana valiny lehibe amin'ireo adin-tsaina ny atidohanao.
Tsy nifarana teo anefa ny valiny. Matetika, ny amygdala dia mifandray amin'ny valan'aretina prefrontal eo amin'ny ati-doha. Mandritra io fizotran-javatra io, ny atidohanao dia afaka mametraka ireo sary sy traikefa izay jereny ao anaty toe-javatra mety.
Na izany aza, ny zavatra nasehon'ity andrana ity dia hoe tsy dia be loatra io fifandraisana io.
Fa kosa, ny amygdala dia nifandray bebe kokoa tamin'ny locus coeruleus (mifanohitra amin'ny fifehezana). Ity faritra misy ny ati-doha ity dia tompon'andraikitra amin'ny famotsorana ny norepinephrine, izay mialoha ny adrenaline. Adrenaline, mazava ho azy, no mety hiteraka ny sidina na hiady amin'ny valin'ny vatanao.
Misy fiantraikany amin'ny modelyo amin'ny torimaso ve ny volanao?
Tsy misy rohy tokana eo anelanelan'ny torimaso sy ny toe-po. Izany dia satria ny fihetseham-po dia misy fiatraikany amin'ny fomba fatorianao ary ny mifamadika amin'izany.
Araka izany, ny fahaizanao matory dia azo faritana amin'ny toe-tsainao.
Ny vatanao sy ny atidohanao dia mahatsapa fihenjanana sy toe-javatra tsy mahafinaritra fandrahonana . Midika izany fa rehefa tojo toe-javatra mampahory ianao, indrindra ireo izay heverinao fa tsy voafehinao , ny vatanao dia lasa mankarary.
Raha ny tena izy dia miomana ho amin'ny ady na valin'ny sidina ny vatanao.
Ankehitriny, raha maharitra ny fihetseham-po ratsy na ny adin-tsaina, dia tsy dia hisy fiatraikany amin'ny toetranao na ny torimaso fatorianao loatra izany.
rehefa mankaleo amin'ny fiarahana
Na izany aza, raha manohy miaina ireo valiny ratsy ireo hatrany ianao, dia hitandrina hatrany ny vatanao.
Ankehitriny, araka ny azonao an-tsaina, dia sarotra be aminao ny matory rehefa manaitaitra hatrany ny vatanao.
Ka noho izany dia mety hanakorontana ny fomba fatorianao ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po ratsy. Io kosa afaka mamorona tsimbadika ratsy.
Ahoana ny fampiasana ny rohy eo amin'ny torimaso sy ny fahatsapana
Ny fanontaniana lojika indrindra, araka izany, dia inona no tokony hataonao amin'ireo fampahalalana rehetra ireo? Ahoana no azonao ampiasana azy tsara? Misy fomba vitsivitsy hanaovana an'io.
Ny tena miharihary dia ny manatsara ny fomba fatorianao mba hahazoanao torimaso ampy isan'alina.
Araka ny asehon'ny fikarohana etsy ambony dia ilaina ny tsy ahazoanao kely kokoa - ary tsy mihoatra izany - mihoatra ny fito ka hatramin'ny sivy ora fatoriana raha olon-dehibe ianao.
Ireo fomba fatoriana ireo dia tsy maintsy arahana tsy tapaka koa raha te hanampy anao hitazona toe-tsaina tsara.
Mazava ho azy, araka ny efa nianaranao, dia zava-dehibe ny manova ny toe-tsainao mba hahafahanao matory tsara aloha.
Raha sendra mitady vahaolana hanatsarana ny toetranao ianao dia mety ho hitanao fa ny fanao miorina amin'ny fahatsiarovan-tena dia afaka manatsara ny kalitaon'ny torimaso.
Tsy miraharaha ny tenako intsony
Amin'ny alàlan'ny teknikan'ny fialan-tsasatra toy ny fifohana rivotra sy ny fisaintsainana dia ho hitanao fa manana fiadanam-po bebe kokoa ianao ary afaka matory tsara.
Azonao atao koa ny manandrana mamerina ny sasany fanamafisana tsara natao hanampiana anao handresy ny adin-tsaina sy ny fanahiana .
Ny fampihetseham-batana sy ny sakafo ara-tsakafo tsara dia lafiny lehibe koa izay mety hisy fiantraikany amin'ny toetranao sy ny fiasan'ny vatanao sy ny sainao, ka misy vokany eo amin'ny torimaso izany.
Araka ny hitanao dia sarotra ny fifandraisana misy eo amin'ny torimaso sy ny fihetseham-po. Manan-kery eo amin'izy ireo izy ireo ary izany no antony maha-zava-dehibe ny fahazoana ny lafiny roa amin'ilay fampitahana.
Ity rohy misy antony roa ity dia mety hitarika amin'ny tsingerina tsara sy ratsy izay misy fiantraikany amin'ny torimaso ny torimaso sy ny mifamadika amin'izany.
Ny fahazoana an'ity rohy ity sy ny fiaraha-miasa aminy ihany no hahafahana manatsara ny toetranao sy ny fomba fatorianao.
ny fomba ilazana fa liana izy
ara-dalàna fotoana raiki-pitia
tsy mahay zavatra tokony hatao aho
rahoviana vao hivoaka ny vanim-potoana amerikanina 3 rehetra
fomba manorisory ny olona narcissistic